Thenga i-Canrenone powder (976-71-6) HPLC≥98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Canrenone powder (976-71-6)
SKU: 976-71-6. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Canrenone powder (976-71-6), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Canrenone powder yayilawulwa kwii-2 × 82 mg kunye ne-2 × 164 mg ngosuku ngosuku lwe-10 iintsuku kwizigulana zesifo sikashukela esingenayo i-cardiovascular, isibindi okanye ukubandakanyeka kwezintso. I-Aldosterone kunye ne-plasma aldosterone yanda nje kancinci ngexesha lolawulo zombini.
Canrenone powder ividiyo
Canrenone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Canrenone powder
Umjikelezo we-Canrenone powder
I-BRON (BR): I-Canrenone powder
IGAMA JIKELELE (S): Contaren, Luvion, Phanurane, Spiroletan
Ukusetyenziswa kwe-Canrenone powder
Amanqanaba ePlasma ye-Canrenone powder kunye 'nama-metabolites' emva kokuba i-hydrolysis isiseko ifundiswe kwizifundo ezincinci kunye nabantu abadala, emva kokulinganisa kunye kunye neendlela ezininzi ze-spironolactone. Emva kwe-dose yokuqala ngomhla we-1, amazinga e-plasma ye-Canrenone powder eluhlaza kunye 'nama-metabolites' aphezulu aphezulu kuncinci kwiqela elikhulile, kwaye ukungafani okuphawulekayo kwafunyanwa phakathi kwamaqela amabini ama-AUC zombini i-Canrenone powder kunye ' metabolites '. Nangona kunjalo, lo mahluko phakathi kwamaqela amabini ama-age ayancipha emva kokutsalwa kwe-Day 8, kwaye amazinga e-plasma asele ngaphambili angamazinga e-Canrenone kunye ne-'metabolite iyonke 'yayiphakamileyo kakhulu kwizifundo ezikhulile. Amanani okuqokelelwa kwe-Canrenone powder kunye 'nama-metabolite apheleleyo' aphezulu kakhulu kunabantu asebekhulile kunezifundo ezincinane. Bobabini i-Canrenone ipowder eluhlaza kunye ne-canrenoic acid eboshwe kakhulu kwiiprotheyini ze-plasma, kodwa akukho nto yahlukana phakathi kwamaqela amabini kwiiprotheni ezibophelelayo. Ukuqwalasela ukungafani kwamanqanaba e-plasma emva kokungatshatanga kunye kunye neendlela ezininzi phakathi kwezifundo ezincinci kunye nezidala kunokuba nemiphumo yezinto ezininzi ezifana nokutshintshwa ngokulinganayo kwimetabolism kunye nobudala; ukungabikho komlomo ukutyunjwa komlomo womxube womzali; kunye / okanye ukuguqula ivolumu yokusasazwa kweziyobisi.
Yiyiphi imilinganiselo ye-Canrenone powder
Ngomlomo, kwiimeko ezininzi, i-50-200 mg ngemini nje ngokuba idosi enye okanye kwiinkqubo ezininzi zanele.
Kwiimeko ezinzima kakhulu, isilinganisi sokuqala singanyuswa ukuya kwi-300 mg okanye ngaphezulu, ngoko umthamo ulungiswe kwiimpendulo zekliniki kunye neempendulo zebhoratri.
I-Canrenone powder isebenza njani
Uphuhliso lwe-HPLC yesistim se-spectrometric lwaluqhutyelwa kwi-TQ4 Disumvery Discovery ye-triadrupole mass spectrometer nge-Aria CTC HPLC i-autosampler system. Ngaphantsi kwe-electrospray ionization ebonakalayo ion i-ion enkulu ifunyenwe yi-ion protonated ion (M + H) + m / z 341 ye-Canrenone powder. I-Alfaxalone (i-precursor ion m / z 333; i-1 μg) isetyenziswe njengomgangatho wangaphakathi. Ngaphantsi kwe-activation collisional, i ion fragmentation ions m / z 107.1 kunye ne-91.1 ye-Canrenone powder eluhlaza kunye m / z 297.3 kunye ne-315.3 ye-alfaxalone. Ion idiyeshingi yayisetyenziswe njenge-quantifier kwaye i-ion qualification ngokulandelanayo ukufaka inkcukacha kwisilingo. Ulwahlulo olufanelekileyo lwe-steroids lwalufezekiswe ngokusebenzisa i-acetate ye-ammonium (i-5 mM) / i-methanol kwi-60: 40, 0.3 ml / min) kwikholam ye-C18 T3 i-Atlantis HPLC ikholomu (3 μm; 100 × 2.1 mm) kwi-25 ° C. I-gradient ephuma kwi-40 eya kwi-90% i-methanol isetyenziswe, kunye nexesha elipheleleyo lemizuzu ye-8.
Ukuqinisekiswa kweerameter parameters kwenzelwa ukuphindaphinda kweesithandathu kunye ne-inter-assay. I-106.2% (i-9.5%) kunye ne-102.2% (i-RSD 4.7%) kunye ne-25% (i-RSD 1%)) ifumaneka emva kokukhipha umbane okwi-10 i-plasma nge-acetate ye-ethyl (5: 15). Umda wokufumanisa yi-0.9936 ng / ml kunye nomda ophantsi wokulinganisa kwakuyi-5 ng / ml. I-esayayi yayingqinelana (r = 5) phezu kweentlobo (concentrations (400 ng / ml ukuya kwi-5 μg / ml). I-esayibrari yabonakalisa ifanelekile yokwandisa i-Canrenone powder eluhlaza kwiqela lezigulane ezithe zafumana i-45 mg dose, apho kuye kwafunyanwa i-plasma kwi-XNUMX-XNUMX μmol / l.
Iinzuzo ze-Canrenone powder
I-Canrenone powder iyona nto ihamba phambili ye-metabolite ye-spironolactone. Ngokomfanekiso wesakhiwo, usebenza ngokukhuphisana kunye ne-aldosterone ngokuwususa kwiindawo zokumkela kwinqanaba le-distal portion ye-tubal ye-renal kunye nomzila wokuqokelela; oku kubangela ukwanda kwe-diuresis kunye ne-natriuresis kunye nokunciphisa i-kaliuresis. Ukuthelekiswa nomoya we-spironolactone unenzuzo yexesha eliphantsi lokulinda. Njengoko i-spironolactone, ke, ayikho into eyenziwa kwizifundo ezingenasisiseko okanye kwizifundo eziqhelekileyo ezine-secretion ephansi.
Emva kokulawulwa komlomo, i-Canrenone powder eluhlaza ixakeka ngokukhawuleza, ifikelele kwiindawo eziphambili ze-plasma kwiiyure ezimbini zokuqala. Isiqingatha-nobomi malunga neeyure ze-18 kwaye, ngokungafani ne-spironolactone, yenziwe ingatshintshi, ngaphakathi kweeyure ze-72, kunye nomchamo kunye ne-faeces ngepesenti elinganayo.
I-Canrenone powder iboniswe kwiimeko zekliniki apho i-aldosterone eyongeziweyo ivelisa ukugcinwa kwamanzi kunye ne-sodium kunye nokwanda kwe-kaliuria. Ku luncedo ekwenzeni unyuka kwi-ascites kwi-cirrhosis yesibindi, nangona i-dosage iqhutshwa ngokuqhubekayo ukuze imphendulwe kwimeko nganye.
Canrenone powder eluhlaza Ukuthengisa
I-Canrenone ipowder eluhlaza ngumetabolite osebenzayo we-spironolactone, i-canrenoic acid, kunye ne-potassium canrenoate, kwaye ithathwa njengento enoxanduva kwimiphumela yazo. Kufunyenwe kwi-akhawunti malunga ne-10 ukuya kwi-25% ye-potassium-impact effect of spironolactone, kanti enye i-metabolite, i-7α-thiomethylspironolactone (i-7α-TMS), i-akhawunti ye-80% ye-potassium-yokuphazamiseka kweziyobisi.
I-Canrenone powder kuthiwa yinto enamandla njenge-antimineralocorticoid malunga nesi-spironolactone, kodwa isona sinamandla kakhulu kwaye siyasebenza njenge-antiandrogen. Ngokufanayo ne-spironolactone, i-Canrenone powder eluhlaza inqanda i-enzyme ye-steroidogenic efana ne-11β-hydroxylase, i-enzyme ye-cholestol ye-co-chain-chain, i-17-lyase, kunye ne-17,20-hydroxylase, kodwa kwakhona, ngokuthe xa kunjalo, ayinamandla kakhulu ukwenza njalo.
Indlela yokuthenga i-Canrenone powder esuka kwi-AASraw
Canrenone powder eluhlaza Ukupheka